के हजुरलाई छोरो पाउने मन छ, त्यसो भए यसरी हुन्छ तपाईको इच्छा पूरा « गोर्खाली खबर डटकम
ओहो……. कति धेरै नतिजा…। छोरा पाउने केहि सुत्र आमाबुवाको जन्ममितिका आधारमा तयार गरिएका भेटिए । केहि सुत्रमा वर्ष, महिना, दिन अनि बार मिलाउनुपर्ने भेटियो । कतै महिलाको डिम्ब निष्कासनको पहिलो चरणमा यौनसम्बन्ध राख्नुपर्ने कुरा लेखिएको भेटियो । कुनैमा राशि त कुनैमा खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा । सुत्रहरु जताततै थिए । कुनै सुत्र सित्तै उपलब्ध थिए भने कुनै सुत्रका लागि पैसा तिर्नुपर्ने । तर यी कुनै पनि सुत्र वैज्ञानिक रुपले पुष्टि भएका र सतप्रतिशत नतिजा दिने भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टी भने दिएको पाइएन । तर पनि मानिसको चासो यस्ता सामग्रीमा धेरै ! त्यहि भएर होला छोरा पाउने सुत्रबारेका धेरै सामाग्री भेटिएको । एउटा कुनै सामान किन्नु परे त ग्यारेन्टी र वारेन्टी खोजिन्छ आजकाल । तर इन्टरनेटमा पाइने अनि कसैले भनेकै भरमा यस्ता सुत्रमाथि सोझै विश्वास गरेर धेरै दम्पतीले दुख पाएका छन् । सपनामा केरा खाएको अनि गुलियोमा बढी जोड दिएकै आधारमा छोरा हुन्छ भनेर ढुक्क भएर बसेकाले छोरी पाउँदा मन अमिलो बनाउँछन् । खानपान र सपनाकै आधारमा छोरा वा छोरी हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्नेका कारण ती गर्भवती महिला, उसका परिवारले मानसिक रुपमा धेरै पीडा सहनुपरेको उदाहरण पनि छन् । मुखले छोराछोरी दुवै समान हुन् भन्ने तर मानसिकता भने परिवर्तन नगर्ने प्रवृत्तिले महिलामाथिको हिंसा सुसुप्त रुपले वृद्धि हुन सहयोग पुगिरहेको छ । परिवार र समाजले छोरालाई महत्व दिने गरेकै कारण पनि धेरै नेपाली महिला हिंसाको मारमा परेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरुप पछिल्लो समय फेरिदै गएका छन् । समाचारपत्रमा खबर छ ।